Soo -saareyaasha & Alaab -qeybiyeyaasha - Warshadda Shiinaha ee CONVEYOR
Gawaarida qaadista baaldi -diidka, oo sidoo kale loo yaqaan silsiladda baaldiga silsiladda ama wiishka baaldiga silsiladda, ayaa inta badan loo adeegsadaa gudbinta block yar, granular iyo qalab adag, oo si weyn loogu isticmaalo cuntada, beeraha, dawooyinka, qurxinta, kiimikada iyo warshadaha kale. Waxaa inta badan loo adeegsadaa xalka wiishka labaad oo xaddidan meesha bannaan ee goobta.
Tusaalooyinka: hilib digaag, cunto fudud, cuntooyin barafoobay, khudaar, miro, nacnac, kiimikooyin iyo walxo kale.
Bir -qaadaha suunka dhejiska ah ee birta ah waxaa inta badan loo adeegsadaa gaadiidka jiifka ah ee alaabada granular, aad bay ugu habboon tahay cuntada, beeraha, kiimikada maalinlaha ah, kiimikada iyo warshadaha kale ee kala duwan ee badeecadaha socodka xorta ah, sida cuntada firaaqada, cuntada barafaysan, khudaarta, miraha, nacnaca, miraha la qalajiyey, berde, digirta, kiimikooyinka, cuntada xayawaanka iwm.
PU Belt Conveyor oo u janjeera guud ahaan wuxuu ka kooban yahay qayb soo dejinaysa, qayb gudbinta, qayb gudbinta, bareega, aaladda hubinta, qalabka xiisadda, fiyuuska, aaladda roogga qotada dheer iyo aaladda dabada. Inta badan ku habboon cuntada, qalabka, kiimikada, beeraha, waxyaabaha la isku qurxiyo, dawooyinka iyo warshadaha kale ee socodka badeecadaha ee bilaashka ah, sida tufaaxa, liinta, sabiibta, chips baradhada, timirta, lawska, nacnaca, miro qalalan, bariis, dhir udgoon, miro qalalan iyo agabyada kale ee granular gaadiidka tooska ah.
Wiishashka baaldiga keliya ayaa inta badan loo adeegsadaa cuntada, qalabka, kiimikada, dawooyinka iyo warshadaha kale. Sida: xargaha, cufka, walxaha iyo walxo kale.
Gaarsiinta walxaha ka hooseeya ilaa sare hal miisaan weyn. Ku habboon qaadista galleyda, cuntada, quudinta, kiimikada iyo agabka kale ee cuntada. Oscillator -ka electromagnetic -ku wuxuu ka dhigaa gudbinta cuntada iyo agabyada kale mid deggan, isku mid ah oo degdeg ah.
Wareega Suunka Gubashada, Wiishka baaldiga ee rogaya, Xamuulka Fayadhowrka, Gudbinta Silsiladda, Z wiishka baaldi, Wiishashka Cuntada,